Nei Hilton achida Mahogany Bay Resort & Beach Club kuti ive nhau huru dzeBelize?
musha » Dzazvino Nhau Zvinyorwa » Bhizinesi Kufamba » Nei Hilton achida Mahogany Bay Resort & Beach Club kuti ive nhau huru dzeBelize?
Belize Breaking Nhau • Kuputsa Nhau Dzenyika Dzepasi Pose • Kuputsa Kufamba Nhau • Bhizinesi Kufamba • Hospitality Industry • Nhau Dzakanaka • misangano • nhau • ushanyi • Kufamba Kwamugumo Kwidziridzo • Kufamba Wire Nhau • Waini & Midzimu
Kuvhurwa kweMahogany Bay Resort & Beach Club seHilton Curio Unganidzo inyaya huru kune indasitiri yekushanya muBelize uye neHilton Hotels zvese. Inoratidzira kuwedzera kwaHilton muCaribbean / Latin America nharaunda.
Mahogany Bay Resort & Beach Club, chikamu cheCurio Collection yakavhurwa kuAmbergris Caye pachiwi chikuru cheBelize. Ambergris Caye inozivikanwa yemitambo yayo yemvura, scuba diving uye mahombekombe eCaribbean. Kunze kwemahombekombe ekumabvazuva, Belize Barrier Reef inoratidzira inozivikanwa snorkeling uye nzvimbo dzekudonha dzakadai seHol Chan Marine Reserve, ine hupenyu hwakawanda hwegungwa, uye iyo 124m-yakadzika Great Blue Hole. Guta reSan Pedro ndiro gedhi rechitsuwa uye nzvimbo yekufambisa nechikepe. IHilton Curio Collection hotera iri pasi pemamaira maviri kubva kuSan Pedro.
IHilton Curio Collection ine makamuri makumi maviri nemashanu emakamuri uye emakamuri emakamuri pane 205-acre yekumvura nzvimbo ine nzvimbo gumi dzekudyira dzakasiyana, bay uye makirabhu emahombekombe, uye inoshanduka musangano uye nzvimbo dzezviitiko. Iyo Bay Club ine hombe dziva, bar uye poolside spa kurapwa uye yakavanzika chena jecha Beach Club inguva pfupi kukwira kubva kune-saiti marina.
Iyo yekuchengetedza-yakavakirwa nzvimbo inosanganisirwa yemuno zvigadzirwa mune chimiro.
Wepamusoro mhando shanu dzekushanya dzakakurukurwa muna 2021
Shanyira USA: Chaizvoizvo zvitsva zvinodiwa zvekupinda zveUnited...
Maitiro matsva ekufamba: Kuwedzera mari yekufambisa uye ...
Ndiyo Zombie Apocalypse Pamhepo?
UNWTO ndeyaSecretary-General: Yakarasika mu...